Taariikhda My Butros » Top 5 US magaalooyin Raga kelidood
Last updated: Jan. 11 2021 | 2 min akhri
Waxaa jira qaar ka mid ah magaalooyinka Mareykanka, halkaas oo nin oo hal dareento maqsuud ka badan kuwa kale. Doodani waxa ay ku saabsan tahay shan magacyada on hogaanka u hayaan liiskaan ka mid ah magaalooyinka sida. Sidaas, haddii aad tahay nin hal iyo raadinaya in ay kaga guuraan, Tan ku qor-up hubaal noqon doonta Read a faa'iido kuu; iyo haddii aad hore ee magaalooyinkaas middood, aragtid inaad nasiib.
1. City New York: Magaalada Tani ma aha oo kaliya deegaanka dalka ee ugu weyn magaalooyinka waaweyn, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha ugu qeybsaday adduunka. Magaalada dushooda liiskan ee ugu fiican US magaalooyin nin oo hal sabab ah saamiga dadka aan guursan iyo dumarka waxay ku sugan. Wixii kasta 100 nin guursan, magaalada leeyahay 125 haweenka aan la qabin; sidaa, nin keli ah ee Magaalada New York had iyo jeer fursado badan oo la heli karo si ay u doortaan ka marka ay timaado la-hawlgalayaasha gaaray.
Inta tilmaamay “magaalada in marnaba seexdo”, City New York guryaha fursado ku filan si ay u doortaan ka xitaa marka ay timaado goobood oo shukaansi. Waxaad Saaladda in Central Park ama dooran karaa in ay ku qaataan soo jiidasho leh fiidkii ah koox qaaliga ah (magaaladu waxay leedahay wuxoogaa yar oo iyaga ka mid ah kuwo ku).
2. Bismarck: Rag kaligood haya in aan dago fiirsan karo wareejin in Bismarck, caasimadda gobolka North Dakota ee. In kasta oo shaqo kajoojinta hadda waa arin weyn ee America iyadoo ay heerka shaqo la'aanta guud ahaan ku xeeran oo Xasada, 5.6 %, Heerka shaqo la'aanta ee magaalada tani waxa keliya 2.8%.
Waxaa intaa dheer, u soo laallaada iyo waqti la haween, magaaladu waxay leedahay dhowr ah oo dhibco kulul, oo ay ka mid pubs, kooxaha habeen iyo makhaayadaha. Bismarck ogolaanaya shukaansi biyo; waxaad qaadan kartaa rafiiqa aad masaafo doon ee McDowell Dam Nature Park.
Niman jecel baaskiil, Dhanka kale, in xusus baaskiil ka qayb qaadan karto weheliyaan bangiga ee River ee Missouri.
3. Washington D.C.: Haddii aad tahay nin hami hal, caasimada Maraykanka ee waa meesha aad ka tirsan tahay. Magaalada waxaa ku yaala tiro ka mid ah jiidashada taariikhi ah iyo dhaqanka iyo waa meel dumarka hal tiro bataan nin oo hal.
Marka in Washington D.C., waxaad ka heli doontaa ogaaaday of fursadaha xitaa marka raadinaya kaalinta taariikhda a. Waxaad qaadan kartaa lamaanahaaga safarka doonida on Basin Goyiim ah, booqan kartaa Zoo Qaranka, ama ku qaataan dhafan fiidkii ah goobta lagu caweeyo ee taariikhiga ah jazz godod Bohemian The. Kuwani waa uun a doorashooyin dhowr ah aad qabto; waxaad ka heli doontaa badan hal mar aad ku sugan tahay magaalada.
4. Philadelphia: Rafcaanka taariikhi ah magaaladan waxaa ka dhigaa-galooti afaraad ee liiskan. Ragga hal wanaagsan in haweenka ratio hal waa arrin kale oo masuul ah Philadelphia mid ka mid ah hogaanka 5 magaalooyin nin oo hal.
Dating in Philadelphia waa waayo-aragnimo weyn ma ahan oo keliya sababtoo ah goobaha ay sida Fairmount Park, Philadelphia Museum of Art, Ortlieb ee Jazzhaus iyo wixii la mid ah, cimilada magaalada ayaa sidoo kale mas'uul ka yahay jannada dater ah ee samaynta. All maalmood waa maalmaha qoraxdu in Philadelphia.
5. Miami: Cawayska The basbaaska leh ee u magaalo weyn ee joogitaan nin oo hal dhigaysa. Qiimaha hooseeyo ee ku nool iyo jiritaanka haween badan hal ka badan ragga waa laba arrimood oo kale oo weyn oo ka dhigtay Miami galooti habka kama dambaysta ah ee liiskan.
Mid kasta oo ka mid ah shan magaalo, kuwaas oo u ogolaan doona nin oo hal si ay nolol ka dhacaya. Sidaas, waa gebi ahaanba kor u dooranaya mid aad jeceshahay inay u guuraan.